Angry Birds Star Wars 1.3.0 for PCs full with patch ~ လမင်းတရာ
Angry Birds Star Wars 1.3.0 for PCs full with patch
IN PC games - ON 12:36 AM No comments
Angry Birds Star Wars 1.3.0 for PC | 71.2 MB
အမှန်ဆို Games တွေက ကျွန်တော်လိုင်းမဟုတ်ပါဘူး..။ ဒါပေမယ့် Comment မှာ တောင်း
ထားတာတွေ့လို့ အားချင်းရှာပြီး တွေ့လို့တင်ပေးလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။ နောက် သူကို
Activate လုပ်နိုင်ဖို့ စမ်းသပ်ပြီး အဆင်ပြေတာကြောင့် တခါတည်း Patch ဖိုင်လေးပါတွဲ
တင်ပေးလိုက်ပါတယ်။ လိုအပ်သူများလည်း အောက်မှာဒေါင်းသွားလိုက်ပါ။
Download>>>tusfiles (or) solidfiles (or) davvas
There are lots of levels in Angry Birds Star Wars and getting through them will take youalong time, even though the first few levels on Tatooine are very easy. There are some fun bonus levels too, in which you can play as C3PO or R2D2.
Minimum System Requirements to Install :
OS- Windows XP SP2/Vista/7
CPU- 1.0GHz RAM 512MB